သံသယရှိသူ "တရားမဝင်သောရလဒ်များ" ရှင်းလင်းလမ်းကြောင်း - Your Brain On Porn
သံသယရှိသူ "တရားမဝင်သောရလဒ်များ" ရှင်းလင်းလမ်းကြောင်းသစ်
ယနေ့အထိသုတေသီများကလိင်အင်တာနက်နှင့်အတူ, သုက်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသုက်၏အချိုးအစားထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကူညီ porn-အခမဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှိုင်းယှဉ်၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကျန်းမာလူပျိုတို့အတွက်နုပျို porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းအံ့သောငှါ၎င်း variable တွေကို၏အနည်းငယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ iSEM အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ဒါဘွားအပျိုဖော်ဝင်, တစ်သက်တာအရေအတွက်နှင့် iSEM အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းသစ်, ဘာစွဲသို့မဟုတ် hypersexuality ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်စတင်ရှိမရှိအကဲဆတ်သောပစ္စည်း (iSEM), iSEM သစ်အမျိုးအစားများမှတင်းမာမှု၏ဒီဂရီ, iSEM အသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်း။
သို့သော်လိင်ပညာရှင်များသည် iSEM ၏ငယ်ရွယ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္discoverကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် (သို့မဟုတ်“ ငြင်းဆန်ရန်”) လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများရှာဖွေနေသည်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းနှင့် iSEM အသုံးပြုမှု၏ကျဉ်းမြောင်းသောရှုထောင့်များအကြားဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းပြောဆိုခြင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်လက "ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ" ။
သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုဆန်းစစ်မီ, ကဘာစွဲအပေါ်သုတေသနပြုအသုံးပြုမှုနာရီနှင့်ကြိမ်နှုန်းအဖြစ်တိကျစွာထိုကဲ့သို့သောလိင်စိတ်နိုးထ၏ဒီဂရီကဲ့သို့သောအခြားအချက်များကြောင့်ပြဿနာများကြိုတင်ခန့်မှန်းမဖေါ်ပြခြင်းကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်, အင်တာနက်လိင် applications များအရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, ဖွင့်လှစ် နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011, Laier et al ။ , 2015) ။ အလားတူအချည်းနှီး, အင်တာနက်စွဲရောဂါ (အသုံးပြုမှုနာရီထက်ကစားဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်တွန်းအားပိုမိုဆက်စပ်နေပါတယ်ဒူးထောက် & Rieger, 2015) ။ ဦး နှောက်သည်မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသည်နှင့်ကွာခြားပုံရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုပမာဏနှင့်နုပျိုသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြား linear ဆက်စပ်မှု၏တရားမဝင်သောရလဒ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအနည်းငယ်သာတန်ဖိုးရှိစေသည်။ စာရေးဆရာများရဲရင့်စွာပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုငယ်ရွယ်သော ED တွင်သက်သေမပြနိုင်ပါ။
ပထမဆုံး ဤအတရားမဝင်သောရလဒ်များကိုစာတမ်းများ (၏ဒီနေရာမှာပိုပြီးအပြည့်အဝ critiqued) erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့သော4အဟောင်းတွေလေ့လာမှုများ, ကနေဒေတာတွေကိုအပျေါမှီခို။ ဒါဟာဘာသာရပ်များပျမ်းမျှအသက် 23 နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပြောဆိုထားသည် အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (Prause & Pfaus, 2015) ကြည့်ရှုပြီးနောက် "လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု" နှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်သောသူတို့၏အပတ်စဉ် iSEM ကြည့်ရှုခြင်း၏နံပါတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်။ နှိုးဆွခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၊ စိုက်ထူမှုသို့မဟုတ် ဦး နှောက်ကိုတက်ကြွစေခြင်းတို့ဖြင့်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ တစ်ပတ်လျှင် ၂ နာရီမှ ၂ နာရီကြာသောအကြောင်းအရာများသည်ကြည့်ရှုပြီးနောက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောနှိုးဆွမှုရမှတ်များရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စိုက်ထူသောကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမတွေ့ရှိရ
ဘာသာရပ်များ၏တစ်ဦးကသေးငယ်အရေအတွက်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း Erectile ၏ရာထူးအမည်မေးခွန်းလွှာ (IIEF-6) ကို ယူ. ရသော၏ပျမ်းမျှရလဒ်များမှာသူတို့ပညာရေး (21.4 ထဲက 30 တစ်ရမှတ်) မှခံစားခဲ့ရကြောင်းညွှန်ပြ။ ဒါပမေဲ့အံ့သွ, သုတေသီနာရီကြည့်ရှုရန် ဆက်စပ်. မ IIEF data တွေကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
iSEM ကိုပိုမိုကြည့်ရှုသူများမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို“ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး” နှင့်ပိုမိုလိုလားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (များစွာသောမိတ်ဖက်များမရှိဘဲ၊ သူတို့၏အကြိုက်ဆုံး pornstar နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ) iSEM သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်စွဲလမ်းမှုတိုးများလာသည်။ သို့သော်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းစွဲလမ်းမှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ Voon et al။ , သောဘာသာရပ်များအများစု iSEM နှင့်အတူစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်သော်လည်းမနှင့်အတူလိင်စိတ်နှင့် erectile ပြဿနာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးခြင်းနှင့်မပြည့်စုံသောရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, သူတို့၏နုပျိုဘာသာရပ်များအမှန်တကယ် ED ခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားနေသော်လည်း, စာရေးဆရာများကျယ်ပြန့်ကြောင်း iSEM အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုတစ်ဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရာထူးတိုး Enhancer လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်: "porn ကိုကြည့်နိုင်သလားအိပ်ရာ၌သင်တို့ကိုပိုကောင်းစေ?” (Concordia University - Montreal၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ ၂၀၁၅) ။ ၎င်းတို့၏စက္ကူကိုကွဲပြားခြားနားသောကွာခြားချက်များနှင့်အထောက်အပံ့မရသည့်ကောက်ချက်နှစ်ခုစလုံးအတွက်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဂျာနယ်တွင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ စုစုပေါင်း iSEM အသုံးပြုမှု၊ အသက် iSEM အသုံးပြုမှုစတင်ခြင်း၊ အစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများကိုပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်း၊Isenberg, 2015).
တစ်ဦးကစက္ကန့် 2015 စက္ကူ (ဒီနေရာမှာပိုပြီးအပြည့်အဝ critiquedနော်ဝေး၊ ပေါ်တူဂီနှင့်ခရိုအေးရှားမှအမျိုးသားများတွင် ED နှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က iSEM အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေကိုကြည့်ခဲ့သည် (Landripet & Štulhofer, 2015) ။ သုတေသီများသည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းလိင်မဆက်ဆံသောအမျိုးသားများကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ (စိတ်ဝင်စားစရာက 1999 Cross-Section လေ့လာမှု တစ်ဦးအသက်အုပ်စုတွင်လူအပေါငျးတို့မဟုတ်ဘဲလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်အတွက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်တက်ကြွခဲ့ကြသူရုံတွေထက်, ပါဝင်သည်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းများသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ (Laumann et al ။ , 1999) ။ )
ဤစာတမ်းတွင်အမျိုးသား ၁၈-၄၀ က ED နှုန်းသည် ၃၁% နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်မှုနှုန်း ၃၇% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကစာရေးသူတစ် ဦး ၏အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက်အရ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသား ၅၅ မှ ၃၉ တွင် ED နှုန်းသည် ၅.၈% သာရှိခဲ့သည် (Štulhofer & Bajić, 18) ။ သို့သော်စာတမ်း၏စိတ္တဇသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းကိုမဖော်ပြပါ။
စာရေးသူမြင့်တက်အများပြည်သူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှဆန့်ကျင်ကြောင်း, စာဖတ်သူတွေစိတ်ချမယ့်အစား, iSEM နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်မထင်ထားဘူး။ ဒါကနော်ဝေထက်အများကြီးလျော့နည်း iSEM အသုံးပြု. သတင်းပို့သူကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပျေါတူဂီလူတို့သညျ, အစ ED အများကြီးနိမ့်နှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင်းပေးထား, အလွန်အမင်းပြတ်သားပုံရသည်။ ဤစာတမ်းလည်းဖြစ်ခဲ့သည် တရားဝင်ဝေဖန် အလုပ်မှာဖြစ်လူသိများသို့မဟုတ်တွေးဆ variable တွေကိုအကြားတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံးဆက်ဆံရေးပတ်ဝိုင်းနိုင်ပြည့်စုံမော်ဒယ်များ employ ပျက်ကွက်မှုအတွက် (Hald, 2015).
ဆေးသမားနှင့် arousal နဲ့စိုက်ထူအုပ်ချုပ်သည့်အာရုံကြောအလွှာ၏လေ့လာမှုမှာစာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအခြားအကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ဘက်မလိုက်သုတေသန porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကြားဖြတ်အစိုးရခုနှစ်, သုတေသီများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အဘို့ထိုသူတို့အပေါ်မှီခိုသောသူတို့က, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုလှညျ့စား, လုံလောက်မှုမရှိထောက်ခံကောက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သတိပေး, နှင့်သုတေသနခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် overstated, သိပ္ပံနည်းကျပေမယ့်ဘာမှသည်နှင့်ပင်ကျိုး peer- အချက်ပြစေခြင်းငှါတစ်ခုနောက်ခံအစီအစဉ်ကိုထင်ဟပ်ဖို့ပေါ်လာရသောနေကြတယ် အဆိုပါ sexology လယ်ပြင်၌ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင်: သုတေသနနုပျို ED အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်အတည်ပြု
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Schächtle, U. , Schöler, တီ, & Altstötter-Gleich, C. (2011) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆော်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏အခန်းကဏ္: ။ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14(6), 371–377. http://doi.org/10.1089/cyber.2010.0222
Laier ကို C, Pekal J ကို, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် M က, (2015) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲဆုံးဖြတ်ပါ။ Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2015 Oct;18(10):575-80. doi: 10.1089/cyber.2015.0152.
Kneer, ဂျေ, & Rieger, D. (2015) ။ ပြmနာရှိသည့်ဂိမ်းကစားခြင်း - စိတ်ရင်း၊ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြခြင်းနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အချိန်ကစားခြင်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတန်ဖိုး။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 5(2), 203–213. http://doi.org/10.3390/bs5020203
ချီးမွမ်း, N. , & Pfaus, ဂျေ (2015) ။ သာ။ ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု, Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လိင်လှုံ့ဆော်မှုကိုကြည့်ရှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ, 3(2), 90–98. http://doi.org/10.1002/sm2.58
Voon, V. , မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P. , Porter, အယ်လ်, မောရစ်, အယ်လ်, Mitchell က, အက်စ်, ... Irvine, အမ် (2014) ။ နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ PLoS ONE, 9(7), e102419 ။ http://doi.org/10.1371/journal.pone.0102419
Concordia University - Montreal၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ (2015, မတ်လ 16) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကသင့်ကိုအိပ်ရာထဲပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သလား။ (http://www.concordia.ca/news/cunews/main/stories/2015/03/16/can-watching-porn-make-you-better-in-bed.html) http://www.concordia.ca/news/cunews/main/stories/23/2015/2015/can-watching-porn-make-you-better-in-bed.html မှဇူလိုင်လ 03, 16, ရယူရန်
Isenberg, RA (2015) ။ မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်ကိုကြည့်ရှုခြင်း: တစ်ဦးကမှတ်ချက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ, n / a-n /a။ http://doi.org/10.1002/sm2.71
Landripet, ဗြဲ, & Štulhofer, အေ (2015) ။ အပြာစာပေအသုံးပြုမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်ပါသလား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 12(5), 1136–1139. http://doi.org/10.1111/jsm.12853
Laumann, EO, Paik, အေ, & Rosen, RC (1999) ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေအေအမ်အေ, 281(6), 537-544 ။
Štulhofer, အေ, & Bajić, Ž။ (2006) ။ ခရိုအေးရှားရှိအမျိုးသားများအကြား Erectile နှင့် Ejaculatory အခက်အခဲများပျံ့နှံ့ခြင်း။ ခရိုအရှေဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 47(1), 114-124 ။
Hald, GM က (2015) ။ အပေါ်မှတ်ချက်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူအသုံးပြုမှု Associated နှင့်အလုပ်မဖြစ် Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားသလား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 12(5), 1140–1141. http://doi.org/10.1111/jsm.12877